OEM / ODM days mazuva makumi matatu kubva kudhirowa-Services-Phu Ly Bao Co. Ltd.
Uri pano: Imba>Services
OEM / ODM days mazuva makumi matatu kubva kudhirowa
Unogona OEM kana ODM mukwende nehukuru hwakasiyana, maumbirwo, ruvara, marogo. nezvimwe zvese zvaunoda kuti utitumire iwo mufananidzo kana sampuro uye isu tinogona kuburitsa izvo zvakafanana zvigadzirwa zvichibva pamufananidzo kana sampuro.
Iwe unogona zvakare kutumira dhizaini dhizaini, yedu dhizaini timu ichashanda padhuze newe kuti uwane iwo akasarudzika magadzirirwo.
Unogona OEM kana ODM mukwende nehukuru hwakasiyana, zvimiro, ruvara, marogo. nezvimwe zvese zvaunoda kuti utitumire iwo mufananidzo kana sampuro uye isu tinogona kuburitsa izvo zvakafanana zvigadzirwa zvichibva pamufananidzo kana sampuro
Iwe unogona zvakare kutumira dhizaini dhizaini, yedu dhizaini timu ichashanda padhuze newe kuti uwane iwo akasarudzika magadzirirwo